Mawduuca Gates: Albaabkaaga ee B2B Wanaagsan Ayaa Hogaaminaya! | Martech Zone
Waxyaabaha loo yaqaan 'Gated content' waa istiraatiijiyad ay adeegsadaan shirkado badan oo B2B ah si ay u siiyaan waxyaabo wanaagsan oo macno leh si ay u helaan hoggaamiyeyaal wanaagsan oo is dhaafsi ah. Siinta tooska looheli karo si toos ah lamaheli karo oo qofku wuuheli karaa kadib markuu isweydaarsado macluumaad muhiim ah.
80% hantida suuqgeynta B2B waa dahaadh; maaddaama waxyaabaha ku jira albaabku ay istiraatiijiyad u leeyihiin shirkadaha jiilka hoggaaminaya ee B2B.
Waa muhiim in la ogaado muhiimada ay leedahay waxyaabaha ku jira albaabka haddii aad tahay shirkad B2B isla markaana hantida noocan oo kale ah sida xaqiiqada ah waxay u qalantaa wax ka badan uun sheegitaan. Sidaa awgeed halkan waa maqaal loogu talagalay hantidan qiimaha leh ee leh awood u leh inuu saameyn ku yeesho tayada jiilka led shirkadaha B2B.
Waxyaabaha loo yaqaan 'Gated content' ee loogu talagalay waxqabad kasta oo gudaha looga soo galo waa lacag la'aan waxaa la heli karaa oo keliya marka la isweydaarsado macluumaadka. Sababta aadka ah ee loo qarinayo waxyaabaha waa in la abuuro hogaamin. Markuu adeegsade u soo gudbo degel websaydh oo uu soo dejiyo hanti; waxaa la weydiin doonaa soo booqdaha inuu buuxiyo foom. Foomkani waa macluumaad muhiim u ah suuqleyda si ay ula wareegaan hogaanka. Ledh u hamuun qaba in uu soo dejiyo hanti ayaa laga yaabaa in uu noqdo hoggaan wanaagsan.
Marka waa kuwan faa'iidooyinka caadiga ah ee waxyaabaha ku jira albaabka:
Waxay kordhisaa fursadahaaga qabashada hoggaamiyeyaasha wanaagsan
Waxay sare u qaadeysaa iibka ka soo baxa dariiqyada
Aynu si fiican u ogaanno macmiilkaaga adiga oo ku siinaya fursad aad aragti fiican uga hesho macmiilka
Waxyaabaha loo yaqaan 'Gated content' waxay damacsan yihiin inay ku siiyaan xakameyn fiican iyo xakameyn badan oo ku saabsan ogaanshaha macaamiishaada ama inaad wax badan ka ogaato booqdayaashaada. Waxyaabaha loo yaqaan 'Gated' ayaa sidoo kale leh hoos u dhac sida iyada oo leh faa'iidooyinka SEO-ga oo ka yar, suurtagalnimada in laga kaxeeyo rajadaada websaydhkaaga, ma muuqato muuqaal muuqaal ah oo loogu talagalay isticmaalahaaga kaas oo haddii kale ka caawin lahaa iyaga inay fahmaan cidda aad tahay, ama haysashada bogag yar ama xitaa xaalufinta taraafikada
Waxyaabaha daboolka ka ah waa in si taxaddar leh loo adeegsadaa marka aad xeelado kale leedahay oo aad weli halis ugu jirto inaad lumiso martida qaar. Si kastaba ha noqotee, waxay caddayn kartaa inay faa'iido leedahay helitaanka hoggaan wanaagsan, maxaa yeelay qof si dhab ah u doonaya inuu wax ka ogaado astaanta ama u baahan yahay nuxurka, sidoo kalena u baahan adeegyo qaar ayaa laga yaabaa inuu sida ugu badan isweydaarsado macluumaadka.
Marka maxay yihiin tusaalooyinka waxyaabaha ku xiran albaabka ee aad sida ugu macquulsan ugu diri karto websaydhkaaga adoo rajeynaya inaad hesho xoogaa hagayaal ah?
Halkan waxaa ku yaal jaleec deg deg ah qaar ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee waxyaabaha ku jira albaabka:
eBuugaag - Si aad ah caan uga ah booqdayaasha; Buugga elektaroonigga ah waa hage kaa siin kara macluumaad dhab ah oo ku saabsan khibradda maadada gaarka ah. Waxay noqon kartaa qaab hage gaaban oo gacan ka geysan kara dhisidda wacyiga sumadda iyo hay'adda sumadda; taas oo ka dhigaysa loolan adag in ay noqoto mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee waxyaabaha ku jira albaabka.
Whitepapers - Nooc kale oo caan ah oo ka kooban waxyaabaha xidhan - Wargeysyada Cadceedu waa nooc aad u fiican oo ka kooban waxyaabaha ku jira albaabbada Waa maaddo khibrad u leh lafteeda waxayna ku siin kartaa macluumaadka ugu saxsan ee ku saabsan mowduuc kasta oo laga qoray. Wargeysyada cadcad waa kuwo caan ah maadaama ay yihiin ilo aad loogu kalsoon yahay oo ka kooban waxyaabo aad u fiican waxayna kaa caawin karaan inaad kuu sameysid hogaamiye fikir. Waxyaabaha loo yaqaan 'Gated' ayaa noqon kara il weyn oo hagitaanno wanaagsan ah maxaa yeelay waxay ka heli kartaa dad badan inay kugu kalsoonaadaan oo doonaya inay soo dejiyaan macluumaadkaaga cad.
lagacna - Webinar waa tusaale kale oo ah waxyaabaha ku jira albaabka wanaagsan. Waa wax weyn u qaadis loogu talagalay martida diyaar u ah inay kaqaybqaataan oo kula macaamilaan. Waxqabadyada noocan ahi waxay gacan ka geystaan ​​dhisidda kalsoonida iyo cilaaqaadka muddada dheer. Waxaad sidoo kale kobcin kartaa hogaamiyayaashan xiisaha leh ama kuwa iska diiwaangelinaya webinar. Tani waa nooc ka mid ah waxyaabaha ku jira albaabka oo soo jiidan kara hoggaan wanaagsan sidoo kale.
Waxyaabaha la soo bandhigo ayaa aad muhiim ugu ah safarka iibsadayaasha. Waa muhiim inaad lahaato waxyaabo kooban oo dahaadh wanaagsan leh oo loo diyaariyo rajadaada ku saabsan dhisidda xiriirka iyo hoggaaminta habka kobcinta.
Tags: suuqgeynta b2beBuugaagwaxyaabaha ku dahaadhanjiilka leddiiwaangelintaWebinarswhitepapers